राप्ती सोनारीमा काँग्रेसको अग्राता कायमै, पछाउदै एमाले – Sadarline
१७ असार नेपालगन्ज : राप्ती सोनारीमा नेपाली काँग्रेसको अग्रता कायमै रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार लाहुराम थारुले ४६६८ मतले अग्रता कायम गरेका हुन । उनलाई एमालेका तुलसीराम चौधरीले ४१५२ ले पछाई रहेका छन् । पूर्व सभासद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका पट्टु थारु १४०५ मतले निक्कै पछाडि रहेका छन
बाँकेको राप्तीसोनारीमा ५ वटा वडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । वडा नंं. १, ३, ८ र ९ मा नेपाली काँग्रेसको प्ययानल नै विजयी भएको छ । यसैगरी वडा नं. २ मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत माधव शर्माले जानकारी दिए ।
वडा नं. १ मा नेपाली काँग्रेसका चन्द्र बहादुर ओलीले ८१२ मत प्राप्त गरी विजय भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ६१८ मत प्राप्त गरे ।
वडा नं. २ मा एमालेका मदन कुमार ओलीले १२८१ प्राप्त गरी विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारले ११५३ मत प्राप्त गरे ।
स्मृती देवकोटा / सदरलाइन १७ असार, नेपालगन्ज : बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकामा असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणम आउने क्रम जारी छ । निर्वाचन अधिकृत सुशील देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार गाउपालिका प्रमुखमा एमालेका मानबहादुर रुचालले सुरुदेखिनै अग्रता कायम गरेका छन । खसेको मत २५२४६ मध्ये ८०४० गनिसक्दा उनले […]